ရွှေဖြူးလေး: လူ့ဘ၀ကို ဘာတွေလုပ်ဖို့ လာကြသလဲ..?
ထို့အတွက်ကြောင့် လောကသို့ ဦးဇင်းတို့ ဘာကိစ္စနှင့်လာကြပါသလဲ..? ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ဖြေရာမှာ `ဒါန၊ သီလ၊ သမထ ဆိုတဲ့ စရဏ ကုသိုလ်ကို ရှာဖို့လာကြပါတယ်´ လို့ဖြေရင် မပြည့်စုံသေးပါဘူး။ `၀ိဇ္ဇာဆိုတဲ့ လောကုတ္တရာ ကုသိုလ်ကို အဓိကထားပြီး ရှာရန် လာကြပါတယ်´ လို့ ဖြေဆိုမှသာ မှန်ကန်ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ `လောကုတ္တရာ´ ဆိုတဲ့ စကားကို `လောက+ ဥတ္တရ´ လို့ပုဒ်ခွဲရပါတယ်။ လောကဆိုတာ `ကာမဘုံ (လူ၊ နတ်ပြည် ၆ထပ်)၊ ရူပဘုံ (ရုပ်နာမ်ရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ (၁၆) ဘုံ)၊ အရူပ (ရုပ်မရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ (၄) ဘုံ)၊ စတဲ့လောက သုံးပါးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဥတ္တရ ဆိုတာက `ထွက်မြောက်ခြင်း´ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ထိုစကားနှစ်လုံး ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ `လောကသုံးပါး´မှ ကျွတ်လွတ် ထွက်မြောက်ခြင်းလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ထိုလောကမှ ထွက်မြောက် ကျွတ်လွတ်တဲ့ လောကုတ္တရာ တရားတို့မှာ.. မဂ်လေးပါ၊ ဖိုလ်လေးပါ၊ နိဗ္ဗာန် ဆိုပြီး (၉) ပါးရှိပါတယ်။ ထိုတရား (၉)ပါးကို နှုတ်ပယ်ပြီး ကျန်တဲ့ တရားဟူသမျှက လောကီတရားတွေသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လောကုတ္တရာ တရားတို့ကိုလည်း ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာတော်တွင်းနှင့် ကြုံကြိုက်မှသာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ယခု သာသနာတော်နှင့် ကြုံနေပါပြီ `ကြိုက်ဖို့သာ´ လိုပါတော့တယ်။
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 5:05 AM